Global Voices teny Malagasy » #NETmundial2014 : Mila Magna Carta Iray Ve Ny Tontolon’ny Tranonkala ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Mey 2019 4:22 GMT 1	 · Mpanoratra Marianne Diaz Nandika nirinandrea
Sokajy: Brezila, Fahalalahàna miteny, Fiainana Manokana, Fidirana, Lahavolana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Solovava, Zon'olombelona, Fitantanana-aterineto
Mitatitra mivantana avy ao amin'ny fivoriana manerantany, NETmundial , mikasika ny fitantanana ny aterineto i Marianne Diaz sy Sarah Myers, mpikambana ao amin'ny Advox, fivoriana izay notanterahina ny 23-24 aprily tao Sao Paulo, Brezila. Ny fiarahamonim-pirenena sivily, orinasa, ary solontenan'ny governemanta manerana izao tontolo izao no nangonina hanatanteraka adihevitra momba ny hoavin'ny fitantanana ny aterineto ao anaty tontolo irauy taorian'i Snowden. Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny andiana fitantarana  amin'ilay hetsika.
Anisan'ireo mpandray anjara tao ny mpamorona ny tranonkala na ny World Wide Web Inventor Tim Berners-Lee ; Frank La Rue  mpitondra teny manokana avy amin'ny Firenena Mikambana momba ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra ; Ilay Minisitry ny Kolontsaina Breziliana teo aloha Gilberto Gil ; Demi Getschko , mpikambana ao amin'ny Komity Mpandrindra ny Aterineto Breziliana (CGI.br) sady mpiaro voalohany ny fandraisana ny aterineto tao Brezila ; ary i Alessandro Molon  [pt], mpikambana ao amin'ny kaongresy mpitondra tenin'ny Marco Civil. Adihevitra nosokafan'ireo mpisehatra dimy mpiaro ny aterineto malalaka ny amin'ny maha-zava-dehibe ny fametrahana fitsipika sy fenitra araka ny lalàna ahafahana miaro ny zon'olombelona anaty tranonkala manerana izao tontolo izao.
Tim Berners-Lee, izay niady ny amin'ny tokony hananan'ny tranonkala Magna Carta iray , no nanambara fa satria ny tranonkala dia fitaovana manerantany izay tokony ho jerena amin'ny endriny manontolo, dia mety ary tokony hampihetsika ny famoronana fehezana zo izay azo ampiharina amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fandraisan'andraikitra toy ny Marco Civil. Saingy nomarihany ihany koa ny maha-zava-dehibe ny lalàna ao an-toerana amin'ny fampiharana sy fanamafisana ireo fitsipika ireo. Raha ny marina, raha tsy misy ny fanatanterahana ny fiarovana mahery vaika ny zon'olombelona ataon'ny fitondram-panjakana, dia ho voafetra ihany ny lanjan'ny fenitra manerantanin'izany hevitra mamiratra izany .
Mpihira sady mpanoratra tononkira malaza, i Gilberto Gil , izay nitàna ny toerana maha Minisitry ny Kolontsaina Breziliana nandritra ny fitantànan'i Lula Da Silva ary nitarika ny hetsika goavana hampitomboana ny fahafahana miditra amin'ny fitaovana dizitaly manerana an'i Brezila, no nilaza tamin'ny mpanatrika fa tsy nahalala na inona na inona momba ny tranonkala izy tamin'ny fotoana tsy maintsy niatrehany ny adihevitra momba ny Marco Civil.
Tany amin'ny faran'ilay velakevitra, ny mpitarika ny Web We Want Renata Avila  (sady mpitarika ny vondrona Global Voices) ary Nnenna Nwakanma , mpanolotsaina ny ICT Nizeriana sady mpisolovava ny Free and Open Source Software no olona nasaina hanatevin-daharana ilay adihevitra. Naneho hevitra momba ny maha zava-dehibe ny lalàna toy ny Marco Civil i Nwakanma, tamin'ny fiantsoana ireo vondrona sy ireo governemanta manerana izao tontolo izao mba hiresaka sy handany lalàna mitovy amin'izany. Notsipihany manokana ny toetoetra manerantanin'ny tranonkala izay midika fa raha misy tsy fanajana ny zon'ny olona iray any amin'ny firenena iray hafa, dia misy fiantraikany amin'ny zon'ny olom-pirenena any an-kafa izany, eny fa na any amin'ny firenena iray miaro ny zon'izy ireo aza.
Hanakatonana azy, namporisika ny governemanta i Avila hihaino ny feo sy ny hevitry ny vahoaka rehefa fehizoro ho an'ny sehatra sosialy, lalàna ary politikan'ny tontolon'ny aterineto. Namporisihany ny rehetra handray anjara amin'ny tetikasa Web We Want , ary notsipihany fa raha tsy mihetsika ny mponina maneran-tany amin'ny fanapahankevitra momba ny tokony ho atao, dia hisy ihany anefa fanapahankevitra horaisina. Hitazana fotsiny ny tombotsoan'ny fiarahamonina anaty aterneto amin'ny ankapobeny fotsiny ny lalàna eo an-toerana raha toa ka tsy mampiasa ny fotoana sy ny ezaka ilaina ireo mpiserasera manerana izao tontolo izao mba hamoaka ny ao an-tsainy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/27/138088/
 ampahany amin'ny andiana fitantarana: https://advocacy.globalvoicesonline.org/categories/regions-countries/latin-america-and-caribbean/brazil/
 hananan'ny tranonkala Magna Carta iray: http://www.theguardian.com/technology/2014/mar/12/online-magna-carta-berners-lee-web
 tetikasa Web We Want: http://webwewant.org/